Trolls (2016) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG 2016 92 min Animation
အတုယောငျတှပေေါမြားတဲ့ ယခုခတျေမှာတော့ စဈမှနျတဲ့ပြျောရှငျမှုက ရှားပါလာပွီ ဟနျဆောငျအပွုံးတှေ ဟနျဆောငျနှဈသိမျ့မှုတှထေဲက ပြျောရှငျမှုပြောကျဆုံးနတေဲ့ လူသားတှအေတှကျတော့ နညျးပညာပစ်စညျးတှသေုံးပွီး ပြျောရှငျမှုတှကေို ရှာဖှနေရေပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နှလုံးသားဆိုတဲ့ စဈမှနျတဲ့ဖနျတီးမှုမပါတဲ့ နညျးပညာပစ်စညျးတှကေ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ပြျောရှငျမှုကိုမပေးနိုငျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ ပြျောရှငျမှုကို ဘယျလိုရှာဖှရေမလဲ????
မနကေ့ မမြှျောလငျ့ပဲ ကွညျ့မိတဲ့ Trolls ဆိုတဲ့ ဇာတျကားလေးအကွောငျးပွောခငျြပါတယျ။ ပြျောပြျောရှငျရှငျနတေတျတဲ့ ရောငျစုံဆံပငျရှညျလေးတှရှေိတဲ့ Trolls တှရေဲ့ အလုပျကတော့ သီခငျြးဆိုမယျ ကမယျ တဈယောကျကိုတဈယောကျ နှေးထှေးစှာပှဖေ့ကျမယျ ဒါသူတို့ရဲခဈြစရာကောငျးတဲ့အလုပျပဲ။ ဒီလိုခဈြစရာကောငျးတဲ့ Trolls တှမှော ရနျသူတှရှေိတယျ သူတို့က Bergens တှပေဲ သူတို့ရဲ့ပြျောရှငျမှုကတော့ Trolls တှကေို စားခွငျးပဲ။ Bergens တှရေဲ့ ရနျကလှတျမွောကျပွီး နှဈ၂၀ ကွာတဲ့အခြိနျ ကွီးကယျြတဲ့ပါတီပှဲလုပျတဲ့ခြိနျမှာ Bergans တှရေဲ့ ဖမျးဆီးခငျြးကို ခံရတဲ့ Trolls တှကေို ပွနျလညျကယျတငျမယျ့သူက Trolls တှရေဲ့ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးလေး Poppy ၊မငျးသမီးလေးကို ကူညီပေးမယျ့သူကတော့ Trolls တှရေဲ့ လူ့ထူဆနျးအဖွဈသတျမှတျခံရပွီး Trolls တဈယောကျဖွဈပွီး သီခငျြးမဆိုတဲ့ Branch သူတို့နှဈယောကျပေါငျးပွီး Trolls တှကေို ကယျတငျနိုငျမလား ပြျောရှငျမှုကို ရှာဖို့ဘယျလိုသငျပွမလညျးဆိုတာကတော့……….
Dream Work က ရိုကျကူးထုတျပွီး Justin Timberlake က producer အဖွဈပါဝငျထားပွီး ကိုယျတိုငျအသံသရုပျဆောငျကာ Anna Kendrick, Zooey Deshanel အပါအဝငျ နာမညျကြျော သရုပျဆောငျတှကေ အသံသရုပျဆောငျတှအေဖွဈပါဝငျထားတဲ့ ဒီဇာတျကားက နာမညျကြျော Disney ရဲ့ Moana မကွညျ့ရသေးခငျမှာတော့ ဒီနှဈရဲ့ အကောငျးဆုံး Entertainment အဖွဈဆုံး Animation ဇာတျကားတဈကားပါ။
ဇာတျကားမထှကျခငျအခြိနျးတုနျးကသာမက ထှကျပွီးတဲ့အခြိနျမှာ စိတျဝငျစားမှုမရှိခဲ့ပမေယျ့ ကွညျ့နတေဲ့အခြိနျမှာတော့ ကွညျနူးမှု ပြျောရှငျမှုရသအပွညျ့ကို ခံစားရပါတယျ။ Trailer ထှကျကတညျးက နာမညျကွီးနတေဲ့ သီခငျြးဖွဈတဲ့ Can’t Stop The Feeling ကဇာတျကားနဲ့အရမျးလိုကျသလို ဇာတျကားရဲ့ Climax အခနျးမှာဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးကလညျး အရမျးကိုအဓိပ်ပါယျပွညျ့ဝပွီး တျောတျောကောငျးမှနျပါတယျ။ Lionel Richie ရဲ့ Hello သီခငျြးကို တဈခနျးသုံးထားပွီး အဲ့အခနျးကို တျောတျောမြားမြားသဘောကမြှာပါ ။Animation ရေးဆှဲထားတာက လှပပွီးတျောတျောလေးကို idea ကောငျးပါတယျ Frozen ဇာတျကားလိုပဲ သီခငျြးတှဆေိုရငျး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားကို အကုနျအကွိုကျတှစေ့မှောပါ။
အပျေါမှာပွောခဲ့သလိုပါပဲ စဈမှနျတဲ့ပြျောရှငျမှုကို ဘယျကရှာရမလဲ Trollsတှရေဲ့ ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးလေးဖွဈတဲ့ Poppy ကတော့ပွောတယျ “မငျးရဲ့ရငျဘကျထဲကလာတဲ့အရာကနရှောပါတဲ့ ” အဲ့စကားလေးက တျောတျောအတှေးပှားစပေါတယျ ရုပျဝတ်ထုတှတေိုးတကျလာတဲ့နောကျပိုငျးမှာ လူခငျြးတှဆေုံ့ပွီး စကားပွောဖို့ ရငျးရငျးနှီးနှီးနထေိုငျဖို့က ဝေးကှာလာစပေါတယျ။ အှနျလိုငျးပျေါက နှဈသိမျ့တဲ့ လလှေိုငျးပျေါကစကာလုံးတှထေကျစာရငျ အပွငျမှာတှဆေုံ့ပွီး ရငျးရငျးနှီးနှီးထှေးပှလေို့ကျတာက ပိုပွီးလှပသလို ပိုပွီးနှေးထှေးစပေါတယျ။
ဒီဇာတျကားလေးကို ကွညျ့ပွီးကလေးလူကွီးမရှေးကွိုကျကွမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မကွညျ့ရသေးတဲ့သူတှလေညျး သခြောပေါကျကွညျ့ကွညျ့ပါလို့ ညှနျးဆိုလိုကျရပါတယ။ျ ပွီးရငျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စဈမှနျတဲ့ပြျောရှငျမှုကို ရှာဖှလေိုကျကွရအောငျလား ခငျဗြာ…….
Animation ဆိုပမေ့ယျ အသံ သရုပျဆောငျ နာမွညျတှဖေတျရုံနဲ့ ဖြားသှားလောကျပါတယျ။
Credit : #MMDB_Review #Troll #ZKK
အတုယောင်တွေပေါများတဲ့ ယခုခေတ်မှာတော့ စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုက ရှားပါလာပြီ ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေ ဟန်ဆောင်နှစ်သိမ့်မှုတွေထဲက ပျော်ရွှင်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လူသားတွေအတွက်တော့ နည်းပညာပစ္စည်းတွေသုံးပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ရှာဖွေနေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှလုံးသားဆိုတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ဖန်တီးမှုမပါတဲ့ နည်းပညာပစ္စည်းတွေက ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမပေးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ????
မနေ့က မမျှော်လင့်ပဲ ကြည့်မိတဲ့ Trolls ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ ရောင်စုံဆံပင်ရှည်လေးတွေရှိတဲ့ Trolls တွေရဲ့ အလုပ်ကတော့ သီချင်းဆိုမယ် ကမယ် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နွေးထွေးစွာပွေ့ဖက်မယ် ဒါသူတို့ရဲချစ်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ။ ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ Trolls တွေမှာ ရန်သူတွေရှိတယ် သူတို့က Bergens တွေပဲ သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကတော့ Trolls တွေကို စားခြင်းပဲ။ Bergens တွေရဲ့ ရန်ကလွတ်မြောက်ပြီး နှစ်၂၀ ကြာတဲ့အချိန် ကြီးကျယ်တဲ့ပါတီပွဲလုပ်တဲ့ချိန်မှာ Bergans တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးချင်းကို ခံရတဲ့ Trolls တွေကို ပြန်လည်ကယ်တင်မယ့်သူက Trolls တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးလေး Poppy ၊မင်းသမီးလေးကို ကူညီပေးမယ့်သူကတော့ Trolls တွေရဲ့ လူ့ထူဆန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီး Trolls တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သီချင်းမဆိုတဲ့ Branch သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး Trolls တွေကို ကယ်တင်နိုင်မလား ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖို့ဘယ်လိုသင်ပြမလည်းဆိုတာကတော့……….
Dream Work က ရိုက်ကူးထုတ်ပြီး Justin Timberlake က producer အဖြစ်ပါဝင်ထားပြီး ကိုယ်တိုင်အသံသရုပ်ဆောင်ကာ Anna Kendrick, Zooey Deshanel အပါအဝင် နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်တွေက အသံသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားက နာမည်ကျော် Disney ရဲ့ Moana မကြည့်ရသေးခင်မှာတော့ ဒီနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Entertainment အဖြစ်ဆုံး Animation ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။
ဇာတ်ကားမထွက်ခင်အချိန်းတုန်းကသာမက ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ပေမယ့် ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ ကြည်နူးမှု ပျော်ရွှင်မှုရသအပြည့်ကို ခံစားရပါတယ်။ Trailer ထွက်ကတည်းက နာမည်ကြီးနေတဲ့ သီချင်းဖြစ်တဲ့ Can’t Stop The Feeling ကဇာတ်ကားနဲ့အရမ်းလိုက်သလို ဇာတ်ကားရဲ့ Climax အခန်းမှာဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကလည်း အရမ်းကိုအဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး တော်တော်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ Lionel Richie ရဲ့ Hello သီချင်းကို တစ်ခန်းသုံးထားပြီး အဲ့အခန်းကို တော်တော်များများသဘောကျမှာပါ ။Animation ရေးဆွဲထားတာက လှပပြီးတော်တော်လေးကို idea ကောင်းပါတယ် Frozen ဇာတ်ကားလိုပဲ သီချင်းတွေဆိုရင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကို အကုန်အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို ဘယ်ကရှာရမလဲ Trollsတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ Poppy ကတော့ပြောတယ် “မင်းရဲ့ရင်ဘက်ထဲကလာတဲ့အရာကနေရှာပါတဲ့ ” အဲ့စကားလေးက တော်တော်အတွေးပွားစေပါတယ် ရုပ်ဝတ္ထုတွေတိုးတက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ လူချင်းတွေ့ဆုံပြီး စကားပြောဖို့ ရင်းရင်းနှီးနှီးနေထိုင်ဖို့က ဝေးကွာလာစေပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်က နှစ်သိမ့်တဲ့ လေလှိုင်းပေါ်ကစကာလုံးတွေထက်စာရင် အပြင်မှာတွေ့ဆုံပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီးထွေးပွေ့လိုက်တာက ပိုပြီးလှပသလို ပိုပြီးနွေးထွေးစေပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်ပြီးကလေးလူကြီးမရွေးကြိုက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေလည်း သေချာပေါက်ကြည့်ကြည့်ပါလို့ ညွှန်းဆိုလိုက်ရပါတယ။် ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေလိုက်ကြရအောင်လား ခင်ဗျာ…….
Animation ဆိုပေ့မယ် အသံ သရုပ်ဆောင် နာမြည်တွေဖတ်ရုံနဲ့ ဖျားသွားလောက်ပါတယ်။
Option 1 storage.msubmovie.com 437 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 437 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 437 MB SD (480p)
Option7storage.msubmovie.com3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option9yuudrive.me3GB FHD (1080p) DTS 5.1